गाँठो फुकाउन दाहालको अग्रसरता, किन पछि हट्यो एमाले ?::NepalBhaskar
गाँठो फुकाउन दाहालको अग्रसरता, किन पछि हट्यो एमाले ?
काठमाडौं, १५ पुुष ।
एमालेले बहुमतीय बाटोबाट राष्ट्रियसभा चुनाव हुनुपर्ने भनी लिएको अडानबीच सरकारले भने एकल संक्रमणीय विधिबाट चुनाव गर्न अध्यादेश अघि बढाएको थियो। दुई दलबीच यो विवादले ‘इगो’ को रूप लिँदै गएपछि अघि सरे, माओवादी अध्यक्ष दाहाल।
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले अन्ततः राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु सरकार निर्माणका लागि बाटो खोल्नु रहेको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्र्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।